बलिउडका चर्चित ५ अभिनेत्री जस्ले बाबु छोरासँग प्रेम गरे ! – Dainik Samchar
August 21, 2021 463
बलिउडमा धेरै अनस्क्रिन जोडीहरू देखिन्छन्। बलिउडमा धेरै अभिनेत्रीहरू छन् जो धेरै सुन्दर छिन्। धेरै अभिनेत्रीहरूले आफ्नो समयका अभिनेताहरुको जोडी बनेर दर्शकको मन र दिमागमा बसेका छन् । साथै, ती अभिनेतमहरूको छोराहरूको अनस्क्रिन जोडी पनि बने । त्यस्ता अभिनेत्रीहरूको जसले वास्तविक जीवनका बुबा-छोरासँग अनस्क्रीन प्रेम गरेका छन्।
डिम्पल कपाडिया: अभिनेत्री डिम्पल कपाडिया विनोद खन्ना र उनको छोरासँग फिल्ममा प्रेम गरीन्। डिम्पलले विनोद खन्नासँग ‘खुन का करजना’, ‘बटवारा’ जस्ता धेरै फिल्महरू काम गरेकी छन् । साथै उनले विनोदका छोरा अक्षय खन्नासँग फिल्म ‘दिल चाहता हे’ फिल्ममा रोमान्स गरिन्। फिल्मका दुबै पात्रहरूअझै सम्झिइन्छ।
हेमा मालिनी: बलिउड ड्रीम गर्ल हेमा मालिनीको नाम पनि यस सूचीमा सामेल छ। हेमा मालिनीले ‘सपना के सौदागर’ फिल्ममा राज कपूर साहबसँग रोमान्स गरिन्। साथै उनले अभिनेता ऋषि कपूरसँग धेरै फिल्महरूमा काम गरिसकेकी छन्।
जया प्रादा: सुन्दर अभिनेत्री जया प्रदाले बलिउडमा धेरै सुपरहिट फिल्महरू दिएकी छिन्। जया प्रदाले ‘गंगा तेरे देश मे’, ‘शहजादे’, ‘फरिश्ते’ जस्ता फिल्महरूमा अभिनेता धर्मेन्द्रसँग रोमान्स गरेकी छन्। यसैबीचमा उनले धर्मेन्द्रको छोरा सनी देवलसँग ‘वीरता’ र ‘जाबरदस्त’ जस्ता फिल्महरूमा पनि मुख्य भूमिका निभाएकी छन।
श्रीदेवी: बलिउडको पहिलो महिला सुपरस्टार भनेर चिनिएको दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवीले पनि धेरै हिट फिल्महरू उद्योगलाई दिएकी छन्। श्रीदेवीले धर्मेन्द्रसँग फिल्म ‘नाकाबन्दी’ मा काम गरिन् भने धर्मेन्द्रका छोरा सनी देवलसँग ‘राम अवतार’ फिल्ममा स्क्रिन शेयर गरेकी थिइन।
माधुरी दीक्षित: बलिउड डान्स क्वीन अभिनेत्री माधुरी दीक्षितले आफ्नो सुन्दरता र नृत्यका साथ सबैलाई पागल बनाएकी छिन्। ‘ दयावान’ फिल्ममा माधुरीले विनोद खन्नासँग रोमान्स गरिन्। यसपछि उनले फिल्म ‘मोहब्बत’ मा छोरा अक्षय खन्नासँग पनि अभिनय गरेकी थिइन्।
Prevबेलायतमा पानीमा डुबेर नेपाली विद्यार्थी राईको निधन
Nextपानीमा एक चम्चा यो चिज मिलाई कपालमा लगाउनुहोस्, हुनेछ सिल्की र नरम
मलेसिया खुल्यो : अब नेपाली मजदुर जान पाउने की नपाउने ?
१८ वर्षमै बिवाह गरेकी टिकटक स्टार स्मारिकाको डिभोर्स, सम्वन्ध अन्त्य हुनुको कारण यस्तो रहेछ।
स्वस्तिमा खड्का अभिनित साउथ इन्डियन फिल्म ‘थिरिमाली’को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडिओ (4480)